Afaan Oromoo: Magaalaa Naqamtee fi dadammaqiinsa hogbarruu Oromoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAfaan Oromoo: Magaalaa Naqamtee fi dadammaqiinsa hogbarruu Oromoo
Kitaabota daandii magaalaa Naqamtee irratti gurguraman.
( bbcafaanoromoo)—Hojii kana yoon hojjedhe tarii cee’umsa aartii Oromoof gumaachuu danda’a jedheen daldala kitaabaa eegale jedha dargaggoo Gamtaa Billi.
Sosochiin hog-barruu fi barmaatii kitaabilee dubbisuu jiraattota magaalaa Naqamtee yeroo gara yerootti fooyy’aa akka jiru kan himu dargaggoo Gamtaan, magaalattii keessatti dhalootni faayidaa kitaaba dubbisuu hubate baay’achaa jiraachuu dubbata.
“Maallaqni kitaaba irraa argamu nama hin jijjiiru. Bu’aansaa guddaan hawaasa kana ceesisuu fi akka inni dubbisee of jijjiiru gochuudha,” jedha daldalaan kitaabaa kun.
Kitaabilee ‘Loojikii’ fi ‘Aramaa’ jedhaman maxxansiisun kan beekkamu barsiisaan yunivarsiitii Wallaggaa Dastaa Alamaayyoo magaalota Oromiyaa garaagaraa keessa deemen jira. Sochiin aartii magaala Naqamtee garuu addadha,” jechuun hima.
Barsiisaa yuunvarsiitii Wallaggaa Dassee Alamaayyoo
Kana malees kutannoon daldaltoota kitaabaa kitaabilee Afaan Oromoo dur barreeffaman dabalatee isaan haaraa barbaadanii fiduun gabaaf dhiyeessuu irratti qabanis olaanaa ta’uu barsiisaa Dastaan hima.
“Namni seenaa beekuu barbaada…”
Sagantaan waarii aartii kun dagaagina barmaatii dubbisa kitaabilee dargaggoota fi namoota buleeyyii magaala Naqamteef bu’uura ta’uusaa kan himu dargaggoo Abdi Ittafaa, lakkoofsi kitaabilee magaalattii keessatti barreeffamanii gabaaf dhiyaatan yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu hima.
“Kitaabilee Afaan Oromoo adamsanii dubbisuu irratti daddamaqiinsa guddaatu uumame” jedha.
Kitaabileen magaala Naqamtee keessatti barreeffaman baay’een isaanii siyaasa Oromoo irratti kan xiyyeefatan ta’uu fi yeroo keessa garuu namootni ogummaa isaanii bu’ureeffachuun kitaabilee falaasamaa, tekinoloojii fi diinagdee barreessaa akka jiranis dargaggoo Abdi hima.
Gama biraatin “Namni seenaa beekuu barbaada” kan jedhu daragaggoo Gamtaa, magaala Naqamtee keessatti kitaabileen asoosamaa baay’inaan akka maxxanfaman fi dubbistoota heddu kan qaban immo kitaabilee seenaa, xin-sammuu fi hafuuraa akka ta’an dubbata.
‘Kaleessi har’a miti, har’i ammoo boru hin ta’u’
Rakkoolee kunneen keessaa tokko immoo qaamoleen mootummaa sochii aartii gara dhimma siyaasaatti jijjiirun hooggantoota gumii aartii dabalatee namoota biroo yeroo adda addaatti hidhuu isaanii akka ta’e dubbatu.
Kana malees gurgurtaan kitaabilee bifa qindaa’aa ta’en adeemsifamuu dhabuu fi iddoowwan gurgurtaa fi dubbisa kitaabilee kan akka oolmaa dargaggootaa bulchiinsa magaalichaan mijaa’uu dhabuun rakkoolee isaan biroo ta’uu jiraattotni magaalichaa himu.
Gama biraatin hirmaannaan dubartootaa fooyya’aa jiraatus hanga barbaadamu akka hin taane kan himtu barreessituun kitaaba ‘Duguuggaa’ Gaaddisee Alamaayyoo, barreessitootni dubartootni kitaaba gulaalchisuufillee barreesitoota dhiirolif dursa kennuu dabalatee rakkooleen isaan mudatan kan biroon akka jiranis dubbatti.
Qeerroo AMBOO Irraa! Waamiicha Hiriira Mormii gaafa 22/12/2011 irraa eegaluun hanga Gaaffiin keenya deebsaa guutuu argatuu Qabsoon Qabsoon keessa itti fufa.